Apple Pay inoenderera mberi nekuwedzera kwayo muJapan | Ndinobva mac
Apple Pay inoenderera mberi nekuwedzera kwayo muJapan
Apple Pay haigadzirike pasi rese. Mukuwedzera kwayo kwemamiriro ekunze mumakondinendi akasiyana, nhasi tinoratidzira kuwedzera kuri kuitwa nekambani mumusika weJapan kukurudzira kushandiswa kwe yebhuku rake rekushandisa.
Zvinoenderana neiyo blog yeJapan Ata Kure, Apple ingadai yakaburitsa nhasi a kufona kukwidziridzwa "Hupenyu hutsva", iyo yaizosanganisira mabhanga makuru matanhatu munyika yeAsia muhunyanzvi hwayo, pamwe nekusimudzira kwakasiyana siyana kukurudzira kushandiswa kwemubhadharo wefoni.
Pakati pekusimudzira kwakapihwa, iyo ichave iine kureba kwemwedzi miviri kusvika anotevera Kubvumbi 2, kupa mari kudzoka, kuunganidzwa kwemapoinzi, kana mibairo yakakosha yekutenga mune mamwe mabhureki.
Matunhu akasiyana siyana ave chikamu cheichi chiitiko chitsva chekambani yeNorth America: kubva kumafarmasi kuenda kuzvitoro zvekutengesa, kuburikidza nezvitina-uye-matope zvitoro, makambani emataxi, mabhaisikopo, webhusaiti yekuendesa chikafu webhusaiti,
Uyewo, iwo mabhanga akabatanidzwa mukuwedzera uku kweApple kuJapan kwaizove APLUS, EPOS, JACCS, Cedyna, POCKETCARD uye HUPENYU, ichiwedzera zvakanyanya huwandu hwayo hwemabhangi anoenderana nekuve nemabhangi makuru atove kushandisa tekinoroji yavo. Kuuya manje UCS Izvo zvakare zvichawedzerwa kune "yekushambadzira pack".
Haisi nguva yekutanga kuti Apple iratidze mhando iyi yekusimudzira ye wedzera chimbadzo pane chero zvigadzirwa zvako. Iyi nhanho neApple Pay mune chikamu chemusika weAsia idanho rakatoitwa zvisati zvaitika muUnited States uye muAustralia kana kunyangwe mune dzimwe nyika dzeEurope.
Tichaona kuti kusimudzira uku kutsva kunokanganisa sei nhamba dzekambani yeCalifornia munyika yeJapan. Panguva ino, mumamiriro ezvinhu akafanana mune dzimwe nyika dzekuMadokero, zano iri riri kubhadhara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple Pay inoenderera mberi nekuwedzera kwayo muJapan
Kukundikana kana uchiedza kuumbiridza rekunze dhisiki mune macOS
LG Ultrafine 5k ichave ichiwanikwa kutakura kubva munaKurume 9